Caafimaadkeeda - www.hameenlinna.fi
Hämeenlinna.fi / Kaupunki-info / Soomaali / Caafimaadkeeda
Xanuunada dhimirka ama madaxa
Ka maqnaanshaha iskoolka iyo shaqada looga maqnaado jiro aawadeed
Baaritaanada shaybaarka iyo raajooyinka
Goorma weeye marka aad dhakhtarka u baahan tahay?
Xaaladaha khatarta ah
Gargaarka degdega ah iyo daryeel xanuun oo isbitaal degdega ah
Isku keenista qoyska
Hay'adda dhawrista ilmaha
Naadiyada iyo goobaha hawl-galadda
Asaasidda shariikad ama iskaa u shaqaysashada
Shaqada sida lagu helo
Adeegyada qaxootiga Hämeenlinna dhexdeeda
Sidee baad balan uga qabsanaysaa dhakhtarka ama bukaan daryeeshada?
Ka qabso balanta dhakhtarka ama bukaan daryeeshada wakhti hore. Waxaad aadi kartaa xarunta caafimaadka oo balan ka qabsan kartaa. Waad wici kartaa sidoo kale xaruntaada caafimaadka oo balan ka qabsan kartaa.
Markaad balanta qabsanayso, waxaa lagu weydiinayaa da'daada dhalashada iyo lambarkaaga aqoonsiga (henkilötunnus).
Haddii arintaadu tahay mid degdeg ah, wac subaxii si dhakhso ah 8.00 subaxnimo markay saacaddu ku taagan tahay oo xafiiska balamaha bixiya la furo. Haddii aaddan u baahnayn daryeel degdeg ah waxaad soo wici kartaa xafiiska 10.00 subaxnimo ka dib.
Marka aad soo wacdo waxaa laga yaabaa in taleefanka qof firaaqo ah oo kaa qabtaa uusan joogin. Markaas waxaad taleefanka ka maqlaysaa cajlad kula hadlaysa. Si fiican u dhagayso waxa cajladu ku lee dahay, ka dib sida laguu sheego raac oo yeel. Haddii aad fahmi weydo hadalka cajladda, iska dhagayso ilaa iyo dhamaadka. Markay dhamaato taleefankaaga ayaa xusuusta galaya, ka dibna kalkaalisooinka ayaa ku soo wacaya nusaac ka bacdi.
Markii ay kalkaalisadu ku soo wacdo, u sheeg danta aad lee dahay. Kalkaalisadu waxay ku weydiinaysaa da'daaa dhalashada iyo lambarkaaga aqoonsiga (henkilötunnus). Waxay ka dib kuu qaban balan.
Haddii ay kalkaalisadu u aragto in aad si dhakhso ah ugu baahan tahay dhakhtar, isla maalintaas ayeey balan ku siinaysaa. Haddiise aysan arintaadu degdeg ahayn, waxay noqon inaad sugto. Waxaad dhakhtarka arkaysaa qiyaastii laba todobaad ama bil ka dib.
Dhakhtarka turjubaan ma laguu qabanayaa?
Haddii aad turjubaan u baahan tahay, isla marka aad wacayso oo balanta laguu qabanayo u sheeg oo codso in turjubaan laguu qabto. Xarunta caafimaadka ayaa turjubaanka kuu qabanaysa, adigana wax lacag ah ma bixinaysid oo lagaama rabo.
Waxaad sidoo kale weydiin kartaa in xarunta caafimaadka uu ka shaqeeyo dhakhtar ku hadla afkaaga hooyo.
Maxaa loo baahan yahay inaad horay u soo qaadato?
Marka aad aadayso xaruta caafimaadka ee xaafadda, waxaad horay usii qaadataa kaarka Kela-da iyo daawooyinka aad qaadato warqadda ay ku qora yihiin.
Ilmaha aan wali da'da iskooleeyda gaarin u sii qaad kaarkooda MCH-ka ama xanaanada dhalaanka ee caafimaadka.
Ma dhakhtar baa mise waa bukaan daryeesho neersis ah?
Mar kasta dhakhtar looma baahna Bukaan daryeeshada ayaa talooyin ku siinaysa sidii aad naftaada u daryeeli lahayd ku saabsan. Haddii aad tusaale ahaan qabtid diabeet ama cudurka sonkorta ama dhiig kar, bukaan daryeeshada ayaa talooyin ku siinaysa. Bukaan daryeeshada ayaa smaysa toliinka nabarada, iyadaa samaysa waxyaalaha yaryar oo dhan.
Xarunta caafimaadka qofka balamaha bixiya ayaa ku siinaya talada ah in aad u baahan tahay dhakhtar iyo inaad u baahan tahay bukaan daryeesho.